Okrainiana Mpanao Gazety Voafonja, Ny Rosiana Mpitandro Filaminana Ao Krime No Maka Am-bavany Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2015 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny Български, Español, English
Notanan'ireo manampahefan'ny mpitandro filaminana federaly Rosiana (FSB) tao amin'ny toby Krimeana i Natalya Kokorina, mpamoaka lahatsoratr'ilay hetsika tsy miankina an'ny Ivontoeran'ny Asa Fanaovana Gazety Fanadihadiana nanana ny foibeny ao Simferopol. Notànan'ny FSB tao amin'ny tranon-dray aman-dreniny izy ny 13 Martsa lasa teo, nandritry ny fikarohana iray, ary tsy navela hifandray tamin'i Kokorina ny mpisolovava azy.
Dmytro Klimkin, minisitry ny raharaha ivelany ao Okraina, Dunja Mijatovic, solontenan'ny media avy amin'ny OSCE, ary ny Kaomity ho Fiarovana ny Mpanao Gazety dia samy nitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro ilay mpanao gazety tsy miankina.
Manameloka ny hetsika famoretana atao amin'ny mpanao gazety ao #Crimea, #Ukraine; mitaky famotsorana ilay mpanao gazety @investigator_ua
Ora enina taorian'ny fakàna am-bavany azy dia navotsotra i Kokorina, ary nilaza fa amin'ny maha-vavolombelona azy taminà heloka bevava voafaritry ny Artikla 280.1 amin'ny lalàna Rosiana mifehy ny heloka bevava (fiantsoana vahoaka hanao hetsika hanitsakitsaka ny maha-iray tsy mivaky ny tanin'ny Federasiona Rosiana) no nakàna am-bavany azy. Dzhemil Temishev, mpisolovava an'i Kokorina, niteny hoe nifototra tamin'ireo famoahana marobe nalefan'ny Ivontoerana tety anaty serasera ilay fanadihadiana/fakàna am-bavany.
Anna Andrievska koa nanambara tamin'ireo mpanangona vaovao fa nampiseho didy avy amin'ny fitsaràna ao Simferopol tamin'ny rainy ireo mpampihatra lalàna, izay nilaza fa eo ambany fanadihadiana mikasika heloka beava ny zanany vavy noho ny namoahany “ireo zavatra miaty antso hanonganana ny fanjakana ao Krimea.” Andrievska nilaza fa toa mifamatotra aminà lahatsoratra iray manokana nosoratany tamin'ny 11 Desambra 2012 ary navoakany tao amin'ny tranonkalan'ny Ivontoerana ilay fanenjehana azy noho ny heloka bevava. Ilay lahatsoratra, “Andian-tafika Mpirotsaka an-tSitrapo ao Krimea [Krym],” dia miteny ny tantaran'ireo mpirotsaka an-tsitrapo nanohana ny andian-tafik'ireo mpirotsaka an-tsitrapo Krym (Krimea) sy ireo andianà Krimeana hafa nitolona toy ny ampahany ao anatin'ny tafika Okrainiana tao atsinanan'i Okraina.